Wacaal daray ah: Dagaal ka Qarxi rabba Tukaraq iyo Ciidamadda Somaliland iyo Puntland oo is horfadhiya (dhegayso) – Radio Daljir
Janaayo 21, 2018 11:24 b 0
Wararaka ka imaanaya Maanta Degaanka Tukaraq ee gobalka Sool ayaa sheegaya in Ciidamadda Somaliland iyo Puntland isku horfadhiyaan degaankaas oo horey Maamulka Somaliland ugula Wareegay Puntland.
Labada Ciidan ee Puntland iyo Somaliland ayaa hub culus keensaday agga dagaalka Tukaraq ,Waxaana gabi ahaan ka qaxay degaanka Tukaraq dadkii shacabka ahaa ee kunoola ,Waxaana cabsi xoogan laga qabaa in dagaal xoogan uu ka qarxo tukaraq oo Garowe u jirta 70 KM.
Maxamuud Mirre Nuur oo kamid ah dadka u dhaq dhaqaaqa Arrimaha Bulshadda kuna sugan Tukaraq oo la hadlay Radio daljir ayaa sheegay in xaaladda degaanka maanta tahay mid kacsan ,isla markaana xiisad dagaal kajirto.
Wuxuu shegay in dadka intiisi badnayd magaaladda ay ka qaxeen,isla markaana xaaladu tahay mid aad u kacsan maadama labada Ciidan hub culus keensadeen goobaha colaadu kajirto.
Socdalki Farmaajo Balanbal,Xeraale iyo Caabudwaaq (Sawiro)